Mara Banyere The birimenti-Iri n'Ebe Of Akụ - brewlabsf.com
Submitted By: administrator June 29, 2021 No Comments 28
Gba chaa chaa abụrụla ihe bara uru nye ndị mmadụ nọ ebe ahụ iji jiri oge ezumike ha na-egwuri egwu maka akụ na ụba ha. Gba chaa chaa abụghị ezigbo ọrụ, onye ọ bụla enweghị ekele maka ya ma ndị ịgba chaa chaa bụ akụ zoro ezo nke nwere ike ịme ha ọgaranya n’otu abalị. Enwere ọtụtụ saịtị ịgba chaa chaa dị na weebụ nke ga-eri ihe niile echekwara ma ọ bụ ego onye ọ bụla ma ọ bụrụ na egwu adịghị nke ọma. Fọdụ ndị na-agba chaa chaa na-etinye ego ha chekwara nanị iji nweta ego bara uru. Nchekwa dị oke mkpa bụ ihe dịịrị onye ọ bụla na-akwado ha n’oge nsogbu. Ghara ilekọta oge anya ga-eri ego na akụnụba niile n’ime sekọnd.
ToTo saịtị na atụmatụ ha
Otu nde mmadụ na-enwe mmasị n’ịgba chaa chaa ma ọ bụ egwuregwu ToTo. Ma site na mmụba na ọnụ ọgụgụ nke ndị aghụghọ na ebe nrụọrụ weebụ scamming, ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ iji nkwenkwe na-egwu egwu, na itinye ego na-esi ike. Ndị aghụghọ na-eri ihe (먹튀) akụ niile sitere na onye ọkpụkpọ site na ime ka ha nwee anyaukwu maka itinye ego site n’inye olileanya ụgha maka ọdịnihu. UI nke weebụsaịtị ndị a na-eme ka ha nwee mmasị maka ebumnuche egwuregwu. Mgbe ị na-eji saịtị ToTo ọ bụla, ọtụtụ egwuregwu ịkụ nzọ dị; Ọ dabere na ihe ọkpụkpọ ịhọrọ nke kachasị mma. Na egwuregwu ToTo, ụkpụrụ nkwụghachi ụgwọ dị iche maka ihe omume ọ bụla, dịka mmeri / ọnwụ ma ọ bụ usoro ịkụ nzọ ndụ.
Tofọdụ saịtị ToTo dịnụ na-enye ndị egwuregwu ahụ ịdị mma na nchekwa site na ịnye ha nyiwe ịgba chaa chaa dị mma iji rụọ ọrụ. Saịtị a Arụ ọrụ mgbe nchekwa nchekwa niile gbakwunyere dị ka ọnọdụ ego wdg. ToToTo bụ saịtị kachasị mma maka ọha Korea nke na-enye ndị na-agba chaa chaa nchekwa. Ọ na-emelite ozi na saịtị ojoro iji gbochie ndị ọrụ ịbanye na aghụghọ ọ bụla.